ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နေသည်ဆိုသည့် အဆောက်အအုံကို ၀ယ်မည်ဆိုလျှင် - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နေသည်ဆိုသည့် အဆောက်အအုံကို ၀ယ်မည်ဆိုလျှင်
11 Jul 2019 1:12 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
623 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
''ခွင့်ပြုချက်နဲ့ထားတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကို ဆိုလိုတာလဲ ဆရာ''ဟု မိတ်ဆွေတစ်ဦးက စာ ရေးသူထံ လာရောက်ဆွေးနွေးပါသည်။
''ခွင့်ပြုချက်နဲ့ထားတယ်ဆိုတာက အလွယ်ကူဆုံးပြောရရင် မိမိပိုင်အိမ်၊ အဆောက်အအုံ မြေပေါ်မှာ ငွေကြေး တစ်ပြားတစ်ချပ်မျှမယူဘဲ အခမဲ့ထားခြင်းကို ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်''
''တကယ်လို့ မိဘတွေက သူတို့ ပိုင်အိမ်မှာ သားသမီးကို နေခွင့်ပေးထားရင် ခွင့်ပြုချက်အရ နေထိုင်တာပဲပေါ့ ဟုတ်ပါသလား''
''ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေအမျိုးသမီးတစ်ဦးက သူပိုင်တိုက်ခန်းကို ရောင်းချင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ သူလည်း ကျန်း မာရေးမကောင်းအသက်လည်း ကြီးပြီဆိုတော့ ဆေးကုသဖို့နဲ့ အလှူအတန်းပြုသွားချင်တယ်။ ဝယ်နိုင်ရင် ဝယ်ပါလို့ လာပြောတယ်''
''အဲဒီတိုက်ခန်းမှာ ဘယ်သူနေသလဲ။ အမျိုးသမီးကြီးကိုယ်တိုင်တော့မနေဘူး ဒီလိုလား''
''ဟုတ်တယ်။ သူက သမီးအကြီးနဲ့ နေတယ်။ တိုက်ခန်းမှာသူ့ရဲ့ ချွေးမနေတယ်''
''သားဖြစ်သူက ဘယ်ရောက်သွားလို့လဲ၊ အိမ်ထောင်ကွဲသွားလို့လား''
''သားဖြစ်သူက ကွယ်လွန်သွားတာ သုံးနှစ်ခန့်ရှိပြီပြောတယ်''
''ဒါကြောင့် ချွေးမကို ဆက်မထားချင်တဲ့ သဘောပေါ့''
''ဟုတ်တယ်။ သားမင်္ဂလာဆောင်တော့ နေစရာမရှိလို့ အဲဒီအခန်းကို နေခွင့်ပြုခဲ့တာလို့ ပြောတယ်''
''ချွေးမဖြစ်သူက ဒီတိုက်ခန်းက သူတို့ကို မင်္ဂလာဆောင်စဉ်မှာ လက်ဖွဲ့အဖြစ်ပေးထားတာလို့ ပြောတယ်''
''လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းအဖြစ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင် မိဘကမေတ္တာနဲ့ ပေးကမ်းခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် တရားဥပဒေနဲ့အညီ ပေးကမ်းခြင်းစာချုပ်ရှိရပါမယ်။ စာချုပ်စာတမ်း ရုံးမှာမှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်''
''ပေးကမ်းခြင်းမှာ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်စာချုပ် မပြုလုပ်ရင် တရားမဝင်ဘူးပေါ့''
''အခုတိုက်ခန်းက အမျိုးသမီးကြီးတို့ လင်မယားဝယ်ထားတဲ့ အိမ်ဖြစ်တယ်''
''မိဘများရဲ့ အိမ်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့။ ဖခင်က ရှိသေးလား''
''ခင်ပွန်းသည်ကလည်း ဆုံးသွားပြီ။ တိုက်ခန်းဝယ်စဉ်က ဇနီးရဲ့ အမည်နဲ့ပဲဝယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်''
''ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးကမ်းခြင်း စာချုပ်လည်း မရှိတော့ ဒီကိစ္စက စဉ်းစားစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့''
''သူ့ယောက်ျားရဲ့ အမွေကိုရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ဆင်းမပေးနိုင်ဘူးလို့ ဆိုပြန်တယ်''
''ဒါကလည်း ယောက္ခမဖြစ်တဲ့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ မိခင်တစ်ယောက်လုံး သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတော့ အမွေရခွင့် မရှိသေးဘူးလေ။ ပြီးတော့ သားသမီး ကျန်ရှိခဲ့သလား''
''သားသမီးမရှိဘူးထင်တယ်။ မိခင်ပြောစကားအရတော့ သားသမီးလည်းမရဘူးလို့ ပြောပါတယ်''
''သားသမီးလည်း မရှိဘူးဆိုတော့ အမွေရှင်မိဘထက် စောစွာကွယ်လွန်သွားတဲ့ သားသမီးရဲ့ ချွေးမသို့မဟုတ် သားမက်အနေနဲ့ ယောက္ခမအမွေကို ရခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ ဥပဒေအချက်ကလည်း ရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့် အမွေ ဆက်ခံသူအဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတာလည်း ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုနိုင်တဲ့ အခြေအနေမရှိဘူး''
''တစ်သက်တာခွင့်ပြုချက်နဲ့ ထားတယ်ဆိုတာကြားဖူးတယ်။ အခုကိစ္စမှာ မိဘဖြစ်သူက သားနဲ့ ချွေးမကို နေခွင့်ပြုထားတာက တစ်သက်လုံး နေခွင့်ပြုထားတာမျိုး မဖြစ်နိုင်ဘူးလား''
''ခွင့်ပြုချက်နဲ့ထားတယ်ဆိုတာကတော့ နှုတ်အားဖြင့် ခွင့်ပြုချက်ထားလို့ရတယ်။ ခွင့်ပြုသူရဲ့ ခွင့်ပြုထားတဲ့ အချိန်ကာလအထိပဲ အတည်ဖြစ်တယ်။ မည်သည့်အချိန် ကာလမဆို ခွင့်ပြုချက်ကို ရုပ်သိမ်းခွင့် ရှိတယ်''
''တချို့က တစ်နှစ်ခွင့်ပြုတာမျိုး နှစ်ရှည်ခွင့်ပြုနေထိုင်ခွင့်ပေးတာမျိုးရှိတယ် မဟုတ်လား''
''တချို့ကလည်း ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ အိမ်မှဆင်းပေးပါမယ်။ နေစရာရှာမတွေ့သေးလို့ နှစ်လခန့် ဆက်နေခွင့်ပြုပါလို့ တောင်းဆိုတာ တွေလည်း ရှိတယ်''
''တကယ်လို့ ဆရာပြောသလို ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီး အိမ်ကဆင်းမပေးရင် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲ ဆရာ''
''နောက်ဆုံး အခြေအနေကတော့ မိမိပိုင်အိမ်မှ မဟုတ်တာဗျာ။ တရားစွဲနှင်ချရမယ့် အခြေအနေ ရောက်ကြ တယ်''
''ဒါဆိုရင် ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ထားတာလည်း စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုထားဖို့ လိုတာပေါ့နော်''
''မှန်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ နေထိုင်ခွင့်ပေးထားကြောင်း စာရွက်စာတမ်းနဲ့ ချုပ်ဆိုထားရင်တော့ အကောင်းဆုံး ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ခွင့်ပြုချက်နဲ့ မိမိပိုင်အဆောက်အအုံမှာထားတယ်ဆိုတာ ပိုင်ရှင်ရဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဆွေမျိုး ဒါမှမဟုတ် အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တတ်တော့ နှုတ်နဲ့ပဲ နေခွင့်ပြုတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်''
''ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ။ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ နေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ စာချုပ်ကို မှတ်ပုံတင်ဖို့ လိုပါသေးလား''
''ဒီအချက်ကတော့ အရေးကြီးတယ်ဗျ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗဟုသုတအဖြစ် ပြောရရင် တရားရုံးချုပ်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ တဲ့ ဦးသာရှိန်ပါ (၂) နှင့် ကိုတင်လှပါ (၂) ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ - ၆၅၉ မှာ လျှောက်ထားခံရသူ ကိုတင်လှတို့အနေဖြင့် ၎င်းတို့အား အဆောက်အအုံ၌ တစ်သက်တာနေထိုင်ခွင့်ပေးထား သည်ဟုဆိုစေကာမူ နောက်ထပ်တစ်နှစ်နေထိုင်ရန် ခွင့်ပန်ခြင်းမှာ မူလက ပေးထားသော ကတိပဋိညာဉ်သည် ပဋိညာဉ်ဥပဒေ ပုဒ်မ - ၆၂ အရ ပျက်ပြယ်သွားပြီဟု ယူဆရန် အကြောင်းရှိသည်။ ထို့ပြင် တစ်သက်တာခွင့်ပြု သည်ဟု ဆိုရာ၌ ဥပဒေအရ တရားမဝင်ပေ။ တစ်နှစ်ထက်ကျော်၍ နေထိုင်ခွင့်ပေးခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ဆက်လက်၍ နေထိုင်ခွင့်ပေးခြင်းသော်လည်းကောင်း ၎င်းတို့တွင် ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းရေး အက် ဥပဒေ ပုဒ်မ (၉) အရစာဖြင့် ရေးသားချက်ရှိရမည်။ ယင်းရေးသားချက်ကို မှတ်ပုံတင် အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ (၁) (ခ) အရ မှတ်ပုံတင်ရမည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသဖြင့် ယင်းတစ်သက်တာ နေခွင့်ပေးသော အခွင့်အရေး မှာ တရားဥပဒေအရ ပျက်ပြယ်သွားသည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်''
''ဒါဆိုရင် တစ်သက်တာ နေထိုင်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင် ခွင့်ပြုကြောင်း စာချုပ်စာတမ်းရုံးမှာ မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ပြု လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့''
''မှန်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို မူတည်ပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ထုံး စာမျက်နှာ ၁၇၈ မှာ ဖော်ပြထား တဲ့ ဒေါ်သန်းပါ (၄) နှင့် ဒေါ်သန်းသန်း (၎င်း၏ ကိုယ်စားလှယ် - ဒေါ်ခင်ယုဇန) စီရင်ထုံးမှာ မပယ်ဖျက်နိုင် သော ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နေသည်ဆိုရာ၌ မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိပိုင် ဆောက်အအုံမှာ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထားမည်ဆိုလျှင် စာချုပ်စာတမ်းနှင့် ချုပ် ဆိုထားရှိသင့်ပါ တယ်''ဟု ဆွေးနွေးလိုက်ပါသည်။
Credit: ထီယု (ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံ)
''ခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ထားတယျဆိုတာ ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးကို ဆိုလိုတာလဲ ဆရာ''ဟု မိတျဆှတေဈဦးက စာ ရေးသူထံ လာရောကျဆှေးနှေးပါသညျ။
''ခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ထားတယျဆိုတာက အလှယျကူဆုံးပွောရရငျ မိမိပိုငျအိမျ၊ အဆောကျအအုံ မွပေျေါမှာ ငှကွေေး တဈပွားတဈခပျြမြှမယူဘဲ အခမဲ့ထားခွငျးကို ဆိုလိုတာဖွဈတယျ''
''တကယျလို့ မိဘတှကေ သူတို့ ပိုငျအိမျမှာ သားသမီးကို နခှေငျ့ပေးထားရငျ ခှငျ့ပွုခကျြအရ နထေိုငျတာပဲပေါ့ ဟုတျပါသလား''
''ကြှနျတေျာ့ မိတျဆှအေမြိုးသမီးတဈဦးက သူပိုငျတိုကျခနျးကို ရောငျးခငျြတယျလို့ ပွောတယျ။ သူလညျး ကနျြး မာရေးမကောငျးအသကျလညျး ကွီးပွီဆိုတော့ ဆေးကုသဖို့နဲ့ အလှူအတနျးပွုသှားခငျြတယျ။ ဝယျနိုငျရငျ ဝယျပါလို့ လာပွောတယျ''
''အဲဒီတိုကျခနျးမှာ ဘယျသူနသေလဲ။ အမြိုးသမီးကွီးကိုယျတိုငျတော့မနဘေူး ဒီလိုလား''
''ဟုတျတယျ။ သူက သမီးအကွီးနဲ့ နတေယျ။ တိုကျခနျးမှာသူ့ရဲ့ ခြှေးမနတေယျ''
''သားဖွဈသူက ဘယျရောကျသှားလို့လဲ၊ အိမျထောငျကှဲသှားလို့လား''
''သားဖွဈသူက ကှယျလှနျသှားတာ သုံးနှဈခနျ့ရှိပွီပွောတယျ''
''ဒါကွောငျ့ ခြှေးမကို ဆကျမထားခငျြတဲ့ သဘောပေါ့''
''ဟုတျတယျ။ သားမင်ျဂလာဆောငျတော့ နစေရာမရှိလို့ အဲဒီအခနျးကို နခှေငျ့ပွုခဲ့တာလို့ ပွောတယျ''
''ခြှေးမဖွဈသူက ဒီတိုကျခနျးက သူတို့ကို မင်ျဂလာဆောငျစဉျမှာ လကျဖှဲ့အဖွဈပေးထားတာလို့ ပွောတယျ''
''လကျဖှဲ့ပစ်စညျးအဖွဈပေးခဲ့တယျဆိုရငျ မိဘကမတ်ေတာနဲ့ ပေးကမျးခွငျးဖွဈတဲ့အတှကျ တရားဥပဒနေဲ့အညီ ပေးကမျးခွငျးစာခြုပျရှိရပါမယျ။ စာခြုပျစာတမျး ရုံးမှာမှတျပုံတငျ ပွုလုပျခြုပျဆိုရမှာ ဖွဈပါတယျ''
''ပေးကမျးခွငျးမှာ စာခြုပျစာတမျး မှတျပုံတငျစာခြုပျ မပွုလုပျရငျ တရားမဝငျဘူးပေါ့''
''အခုတိုကျခနျးက အမြိုးသမီးကွီးတို့ လငျမယားဝယျထားတဲ့ အိမျဖွဈတယျ''
''မိဘမြားရဲ့ အိမျပဲဖွဈနမှောပေါ့။ ဖခငျက ရှိသေးလား''
''ခငျပှနျးသညျကလညျး ဆုံးသှားပွီ။ တိုကျခနျးဝယျစဉျက ဇနီးရဲ့ အမညျနဲ့ပဲဝယျခဲ့တာဖွဈတယျ''
''ဘာပဲဖွဈဖွဈပေးကမျးခွငျး စာခြုပျလညျး မရှိတော့ ဒီကိစ်စက စဉျးစားစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့''
''သူ့ယောကျြားရဲ့ အမှကေိုရပိုငျခှငျ့ရှိတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဆငျးမပေးနိုငျဘူးလို့ ဆိုပွနျတယျ''
''ဒါကလညျး ယောက်ခမဖွဈတဲ့ ခငျပှနျးသညျရဲ့ မိခငျတဈယောကျလုံး သကျရှိထငျရှားရှိနတေော့ အမှရေခှငျ့ မရှိသေးဘူးလေ။ ပွီးတော့ သားသမီး ကနျြရှိခဲ့သလား''
''သားသမီးမရှိဘူးထငျတယျ။ မိခငျပွောစကားအရတော့ သားသမီးလညျးမရဘူးလို့ ပွောပါတယျ''
''သားသမီးလညျး မရှိဘူးဆိုတော့ အမှရှေငျမိဘထကျ စောစှာကှယျလှနျသှားတဲ့ သားသမီးရဲ့ ခြှေးမသို့မဟုတျ သားမကျအနနေဲ့ ယောက်ခမအမှကေို ရခှငျ့မရှိဘူးဆိုတဲ့ ဥပဒအေခကျြကလညျး ရှိနတေယျ။ ဒါကွောငျ့ အမှေ ဆကျခံသူအဖွဈနပေါတယျဆိုတာလညျး ဥပဒအေရ ခှငျ့ပွုနိုငျတဲ့ အခွအေနမေရှိဘူး''
''တဈသကျတာခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ ထားတယျဆိုတာကွားဖူးတယျ။ အခုကိစ်စမှာ မိဘဖွဈသူက သားနဲ့ ခြှေးမကို နခှေငျ့ပွုထားတာက တဈသကျလုံး နခှေငျ့ပွုထားတာမြိုး မဖွဈနိုငျဘူးလား''
''ခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ထားတယျဆိုတာကတော့ နှုတျအားဖွငျ့ ခှငျ့ပွုခကျြထားလို့ရတယျ။ ခှငျ့ပွုသူရဲ့ ခှငျ့ပွုထားတဲ့ အခြိနျကာလအထိပဲ အတညျဖွဈတယျ။ မညျသညျ့အခြိနျ ကာလမဆို ခှငျ့ပွုခကျြကို ရုပျသိမျးခှငျ့ ရှိတယျ''
''တခြို့က တဈနှဈခှငျ့ပွုတာမြိုး နှဈရှညျခှငျ့ပွုနထေိုငျခှငျ့ပေးတာမြိုးရှိတယျ မဟုတျလား''
''တခြို့ကလညျး ကြှနျတျော ကြှနျမတို့ အိမျမှဆငျးပေးပါမယျ။ နစေရာရှာမတှသေ့ေးလို့ နှဈလခနျ့ ဆကျနခှေငျ့ပွုပါလို့ တောငျးဆိုတာ တှလေညျး ရှိတယျ''
''တကယျလို့ ဆရာပွောသလို ဆကျလကျနထေိုငျခှငျ့ပေးလိုကျပွီး အိမျကဆငျးမပေးရငျ ဘယျလိုဖွဈနိုငျသလဲ ဆရာ''
''နောကျဆုံး အခွအေနကေတော့ မိမိပိုငျအိမျမှ မဟုတျတာဗြာ။ တရားစှဲနှငျခရြမယျ့ အခွအေနေ ရောကျကွ တယျ''
''ဒါဆိုရငျ ခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ ထားတာလညျး စာခြုပျစာတမျးနဲ့ ပွုလုပျခြုပျဆိုထားဖို့ လိုတာပေါ့နျော''
''မှနျပါတယျ။ ခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ နထေိုငျခှငျ့ပေးထားကွောငျး စာရှကျစာတမျးနဲ့ ခြုပျဆိုထားရငျတော့ အကောငျးဆုံး ပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ မိမိပိုငျအဆောကျအအုံမှာထားတယျဆိုတာ ပိုငျရှငျရဲ့ အနီးစပျဆုံးဆှမြေိုး ဒါမှမဟုတျ အရငျးနှီးဆုံး မိတျဆှတှေဖွေဈတတျတော့ နှုတျနဲ့ပဲ နခှေငျ့ပွုတာတှေ ဖွဈတတျတယျ''
''ဟုတျကဲ့ ဆရာ။ ခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ နထေိုငျခှငျ့ပေးတဲ့ စာခြုပျကို မှတျပုံတငျဖို့ လိုပါသေးလား''
''ဒီအခကျြကတော့ အရေးကွီးတယျဗြ။ ဒါနဲ့ ပတျသကျလို့ ဗဟုသုတအဖွဈ ပွောရရငျ တရားရုံးခြုပျက ဆုံးဖွတျခဲ့ တဲ့ ဦးသာရှိနျပါ (၂) နှငျ့ ကိုတငျလှပါ (၂) ၁၉၆၇ ခုနှဈ၊ မွနျမာနိုငျငံတရားစီရငျထုံးစာမကျြနှာ - ၆၅၉ မှာ လြှောကျထားခံရသူ ကိုတငျလှတို့အနဖွေငျ့ ၎င်းငျးတို့အား အဆောကျအအုံ၌ တဈသကျတာနထေိုငျခှငျ့ပေးထား သညျဟုဆိုစကောမူ နောကျထပျတဈနှဈနထေိုငျရနျ ခှငျ့ပနျခွငျးမှာ မူလက ပေးထားသော ကတိပဋိညာဉျသညျ ပဋိညာဉျဥပဒေ ပုဒျမ - ၆၂ အရ ပကျြပွယျသှားပွီဟု ယူဆရနျ အကွောငျးရှိသညျ။ ထို့ပွငျ တဈသကျတာခှငျ့ပွု သညျဟု ဆိုရာ၌ ဥပဒအေရ တရားမဝငျပေ။ တဈနှဈထကျကြျော၍ နထေိုငျခှငျ့ပေးခွငျးသျောလညျးကောငျး၊ တဈနှဈပွီးတဈနှဈ ဆကျလကျ၍ နထေိုငျခှငျ့ပေးခွငျးသျောလညျးကောငျး ၎င်းငျးတို့တှငျ ပစ်စညျးလှဲပွောငျးရေး အကျ ဥပဒေ ပုဒျမ (၉) အရစာဖွငျ့ ရေးသားခကျြရှိရမညျ။ ယငျးရေးသားခကျြကို မှတျပုံတငျ အကျဥပဒပေုဒျမ ၁၇ (၁) (ခ) အရ မှတျပုံတငျရမညျ။ ထိုသို့ ပွုလုပျထားခွငျးမရှိသဖွငျ့ ယငျးတဈသကျတာ နခှေငျ့ပေးသော အခှငျ့အရေး မှာ တရားဥပဒအေရ ပကျြပွယျသှားသညျဟု ဆုံးဖွတျထားပါတယျ''
''ဒါဆိုရငျ တဈသကျတာ နထေိုငျခှငျ့ပွုတယျဆိုရငျ ခှငျ့ပွုကွောငျး စာခြုပျစာတမျးရုံးမှာ မှတျပုံတငျစာခြုပျ ပွု လုပျဖို့လိုတာပေါ့''
''မှနျပါတယျ။ ဒီအခကျြကို မူတညျပွီး ၁၉၉၁ ခုနှဈ မွနျမာနိုငျငံ တရားစီရငျထုံး စာမကျြနှာ ၁၇၈ မှာ ဖျောပွထား တဲ့ ဒျေါသနျးပါ (၄) နှငျ့ ဒျေါသနျးသနျး (၎င်းငျး၏ ကိုယျစားလှယျ - ဒျေါခငျယုဇန) စီရငျထုံးမှာ မပယျဖကျြနိုငျ သော ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့နသေညျဆိုရာ၌ မှတျပုံတငျစာခြုပျပွုလုပျရနျလိုအပျကွောငျး ဆုံးဖွတျထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မိမိပိုငျ ဆောကျအအုံမှာ ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ထားမညျဆိုလြှငျ စာခြုပျစာတမျးနှငျ့ ခြုပျ ဆိုထားရှိသငျ့ပါ တယျ''ဟု ဆှေးနှေးလိုကျပါသညျ။
Credit: ထီယု (ဥပဒအေတိုငျပငျခံ)
အဆောက်အအုံ ဗဟုသုတ သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဝယ်ယူ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရမှ စီမံခန့်ခွဲသည့် မြေကွက်များကို ၀ယ်မည်ဆိုလျှင်
ဝါကျွတ်မှာ နေအိမ်သစ်တစ်လုံးဝယ်ယူနေထိုင်ဖို့အတွက် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားရမလဲ…..
အပျောက်စနစ်နှင့် ၀ယ်ထားသည့် တိုက်ခန်းများရှိသော မြေကို ၀ယ်မည်ဆိုလျှင်
တိုက်ခန်းအိမ်ခြံမြေ အရောင်းအ၀ယ် စာချုပ်ချုပ်ရင် စရန်ငွေ ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ
အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ် (BCC) ဆိုတာဘာလဲ ?
အပျောက်စနစ် တိုက်ခန်းများတွင် အိမ်ငှားကွယ်လွန်သွားပါက တိုက်ခန်းကို မြေရှင်ရပိုင်ခွင့်ရှိပါသလား...
လယ်မြေကို အခြားသီးနှံပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးလို့ ရပါသလား ?
အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခွင့် လျှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲ အိမ်ဟောင်းဖျက်ခွင့်ရှိသလား ?
မြေကွက်တွင် ကျူးကျော်သူသည် အမြဲတန်းကာလစည်းကမ်းသတ် ၁၂ နှစ်ကို အားကိုး၍မရနိုင်
ပေ ၂၅x၅၅ ကယျြဝ◌နျးသောတိုကျခနျး ၇လှာ...
ပန်းစကား(မုဒိတာ ၂) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်မှ...
2 ခန်း2ခန်း
160 သိန်း (ကျပ်)
‌ဒေါပုံ ယမုံနာ လမ်းမကြီး တည့်ဆင်းလမ်း အပ်ါဆုံးထပ်
68 x လမ်း 30 အနီး ​ပေ 15 x 50 အငှား ၃ သိန်း ခွဲ
မင်းကြီးရန်နောင်၊58လမ်း လူနေဆိုင်ဖွင့် အငှါး
2.30 သိန်း (ကျပ်)
$2(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)